Ho avy ny maraina - Esther Rasoarimalala Randriamamonjy - blog de la lecture à l'amour, de l'amour à la lecture
" Mavo, tia anao aho ! Meteza hotiaviko, izany havako izany ! Hataoko ho anao ny fitiavako. Ho tia anao mandra-pahatapitry ny fofonaiko aho. Mavo, havako ! Eny, mandra-pahatapitry ny fofonaiko ! " (p. 5)
I Esther R. Randriamamonjy dia nanoratra ity tantara iray ity entina mampiseho ny fitiavana amin'ny endriny maro. Anakiray io notanisaina sy nanokafana ny hosoratana etoana. Fitiavan'olon-droa, tsy niaraka notaizana, tsy niaraka fianarana, sambany vao nifankahita nefa tonga dia nisy fitia nipololotra avy any anaty lalina tany.
" Miharihary aminy ankehitriny fa tsy fitiavana ara-nofo na ara-tsaina amam-panahy fotsiny izay nampiray azy tamin-dRandria no tena mavesa-danja taminy fa indrindra kosa ny fanaovany ny ainy tsy hozavatra. " (p. 209)
Na teo aza ny fitiavan'olon-droa, mbola nisy ihany koa fanehoana fitiavana lalina teo amin'ireo olona ao anaty Ho avy ny maraina ka ny lehibe indrindra dia ny fitiavan-tranindrazana.
" Tanora nanara-maso akaiky ny fizotry ny fiainam-pirenena teto an-toerana, nianina ny zava-nisy, velona tao anatin'ny tantara ary mihoitra hampizotra ny tantara ho amin'ny lalam-baovao nofidiam-bahoaka mba hahatonga ny fahaleovantenan'ny tanindrazana tsy ho fahaleovantena anarany fotsiny. " (p. 126)
Fantatra fa niady mafy tokoa ireo tanora ireo raha zohina ny boky Ho avy ny maraina, fantatra fa nitolona tokoa ary nisy mihintsy ny latsa-drà sy nitondra takaitra ary indrindra indrindra maty.
Izany loha-hevitra momba ny fitiavan-tanidrazana izany dia nasehon'i Esther R. Randriamamonjy tokoa.
Tsikaritra ihany koa fa nisy ireo " mpamadika " sy tsy maty voalavo an-kibo, manantena hatrany fa tsy hahahomby ny ezaka rehetra izay nataon'ny tia tanindrazana.
Ho avy ny maraina, boky tantara entina manaitra ny mpamaky mba hijery sy hisokatra amin'ny tsy rariny izay mihatra amin'ny firenena izay avy nozanahana kanefa eo ambanin'ny fitsetsefana hatrany. Tsy mety tanteraka sy tomombana ny fahaleovantena.
Mba hahamora ny famakiana ny boky Ho avy ny mariana dia nataon'i Esther R. Randriamamamonjy tsotra sy mora ny fomba fampitana ny hevitra rehetra ; ireo teny sy voambolana dia tafiditra amin'ny tontolo manafaingana ny fahazoana ny tian'ny mpanoratra nampitaina. Na dia eo ihany koa aza ny voanteny nampiasaina efa tafiditra ao anatin'ny tahiry na tsy fampiasa firy loatra intsony.
" ... hianjadian'ny tovolahin-katsaka ... , ... loka jorery ... (p.89)
Mampiasa ny haingon-teny isan-karazany entina maneho ny ankaton'ny soratra ihany koa i Esther R. Randriamamonjy. Mampiseho fa manana ny harena afaka manendrika ny asa soratra.
" - Randria mifohaza !
- An ! Hoy Randria mbola mamon-torimaso. Misy teraka indray ?
- Manonofy amalona aho, Randria ! " (p. 134)
Na isan'ireo boky tafiditra amin'ny fandaharam-pianarana hatrany aza Ho avy ny maraina dia hita fa mihafy amin'io fotsiny ireo mpianatra noho ny tsy fahampian'ny voantonta. Vitsy dia vitsy ireo boky amin'ny teny malagasy mivoaka.
Nefa andanin'izany eo ihany koa ny zavatra sarotra maro manakana ny famoahana boky ; etsy ankilany hafa indray ny olana isan-karazany mianjady amin'ireo mpanjifa. Tsy hanitarako ny resaka izany fa tsapan'ny tsirairay sy izay tandrify azy.
" Tsy maintsy velomina ny fanantenana hanjakan'ny mazava. " (p. 108)
Du CCAC à l'IFM Lavakombarika - Clarisse Ratsifandrihamanana
l homme masquer 26/02/2017 12:28
ts beinds koa zn tsisy fanintinna akor aaaaaaaaaaaaaa!
Nathalie 19/10/2016 16:09
zay ranga b ome famontinana !
draina 25/05/2016 15:15
mampihomehy be mihitsy ; io!! izako no nanao an io! dadikove be:
draina 25/05/2016 15:13
tsy misy ny famitinana; isaky ny chapire akory! shhh! lol;;;;;;;;;;
houssen steefler 17/04/2016 13:46
Mba mangataka ny famintinana an'ilay boky azafady!